Uma angiqondi ithenisi, ngeke ngikufake sizofeza ngisho izibikezelo khulula. Kafushane, ngizama ukugcizelela ukuthi virtual ukubheja ejensi, noma njengoba bebizwa kanjalo futhi, izibikezelo ezemidlalo ejensi, bakwazi ukuheha abalandeli ezemidlalo imidlalo ehlukahlukene. Wena ukwazi - indlela yokunqoba nge ngubhuki? Lesi sithakazelo kungenziwa ngokushesha babephakathi okuphakade. A kadokotela ecacile ayikho, ngaphandle yebo ungenawo isipho clairvoyance. Ngikweluleka ukuqala isifundo eningilizayo mayelana nale ndaba umhlahlo, njalo kucatshangelwa izibalo yakamuva kwi ukulahlekelwa, umdlalo kanye nezinga abaphikisi. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye okungenhla kungase kubonise amathuba umhlahlo ecacile. Omunye Interactive ubhuki, lapho mina njalo ukubeka kubhejwa, inikeza izibikezelo abasubathi abadumile. Ngokuvamile, lokho kungubuwula hhayi ukulalela ukwahlulelwa ochwepheshe, kodwa Ngisakuthanda ukubala wonke umuzwa siqu. Ngiyaqiniseka ukuthi professional abadlali, noma kunalokho, ukwahlulela kwabo uzodinga Wabasaqalayo abafuna nje Zihlole ezibikezelweni ezemidlalo.
Ubungozi abadlala njalo razyschut indlela induduzo isifiso adrenaline imizwelo acute kusuka Gameplay. Nokho, Ukuvala yekhasino Nokho, kwacaca ukushaya abadlali, uye wasiphakamisela isinyathelo parallel kwezinsiza Inthanethi, onguchwepheshe projection okhokhelwayo. Mina ngokungagwegwesi bayavuma enjalo izibikezelo ezemidlalo ubusesimweni engikuso ezinsukwini zokugcina akufanele igcine ngokuba yindlela enhle kakhulu uzizwa isipiliyoni ukhohliwe, kodwa futhi awumthombo omuhle we imali eyengeziwe. Yiqiniso, zikhona izibikezelo mahhala Lezinyawo labo abangekho beqiniseka amakhono abo siqu predskazatelskih. Nakuba, uma kwenziwe we ubuqhawe kazwelonke, lezi izibikezelo kufanele ngokuthi kukho olukhulu ngoba ukubikezela ngokuvamile umphumela kunzima kakhulu.
Ngingumuntu owathandayo football, hhayi ukusifihla, ngoba baqonde lokhu: Ngiyayazi indlela abadlali, umsebenzi, aqaphelisise yokudluliswa elikhulu abadlali, wokuqoka abaqeqeshi kanye nezinye ulwazi ivumela ukwenza izibikezelo yimpumelelo, kodwa usebenza ngaso sonke isikhathi .. Njengoba Angazi lutho mayelana hockey, angifuni ukuba afeze futhi izibikezelo yokuthopha. Kafushane, Ngifuna ukugcizelela ukuthi ngubhuki virtual, noma, ngendlela ehlukile zibizwa kanjalo, izibikezelo ejensi, ezemidlalo, abalandeli uzokwazi nentshisekelo ezihlukahlukene kwezemidlalo.
Wena ukwazi - indlela yokunqoba nge ngubhuki? Lo magazini kalula kwenziwe isibaluli inani elivamile. Sula indlela alikho, ngaphandle yebo ungenawo abakwazi ukubikezela. Ngikweluleka ukuqala kahle ukuhlola isihloko umhlahlo, ikakhulu uma kucatshangelwa inani onqobayo yamuva futhi ukulahlekelwa, umdlalo kanye nezinga ukulungiselela abaphikisi. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye okungenhla ukhuluma ngani amathuba isibikezelo lesifanele. Ezinye ubhuki Interactive, lapho mina njalo ukubeka kubhejwa, unikeza ngokusobala ukuhlaziya abasubathi owaziwa. Yebo, kuwubuwula ukungazinaki ukwahlulelwa abadlali, Nokho, Ngikujwayele ngaphezulu uthembele ngokuya umuzwa ngabanye. Ngicabanga izibikezelo ezemidlalo nabadlali, noma kunalokho, imibono yabo izoba wusizo Wabasaqalayo abafuna nje uzame wodwa endle izibikezelo ezemidlalo.
By endleleni, kuyinto efiselekayo lokuqala ukugembula on ezemidlalo nje mahhala, ukubona ezingeni ngangokusemandleni abo. Ngakho, ngeke kube khona bakwazi ukugxila ukuhlaziywa. Uma ubona ukuthi kufanele ukuxazulula iza mayelana ezingaphezu kwesigamu imiphumela, sekuyisikhathi uqale ukuthola ku ukubhejela ezemidlalo. Njengoba mina kuphawuliwe ngaphambili, isu umdlalo ubhuki - kuba kuphela ikhono ngabanye kanye isazela.
Indlela Yokuthola ikhukhi okumnandi
Kanjani ukuze ajabulise wena phambi ucansi?
Leukocyte Jwayelekile e umchamo
Kanjani bamba ithambo ihembe kahle. Iseluleko besifazane abasha futhi amadoda angashadile